Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: osimiri ịgba ọtọ na ndị mmadụ na Jamaica
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: osimiri ịgba ọtọ na ndị mmadụ na Jamaica
Inweta njem nleta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Safety • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
di na nwunye na ọdọ mmiri
dere George Taylor
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na a uwe-nhọrọ ezumike na Jamaica abụghị Nchikota ọtụtụ ndị ọbịa ga-eche banyere mgbe ntinye akwụkwọ ezumike niile na Caribbean. Maka ndị naturist na-achọ ịnụ ụtọ ahụmịhe ezumike ezumike Caribbean, enwere nzuzo na-abịa na oke okomoko na mmetụ nke nudism.
Naghị ejikọ Sandals Resort na ịgba ọtọ, uwe-nhọrọ nhọrọ ma ọ bụ toplessness maka ụmụ nwanyị. Ma oge nwere ike na-agbanwe… ma ọ bụrụ na ọ bụchaghị "ukara resotu amụma"… dịkarịa ala na omume.
Dabere na Castaways Travel: “Anyị enwebeghị ike ịkwado Sandals maka ezigbo onye naturist ma ọ bụ nudist nke na-achọ ịgba ọtọ oge niile, mana enwere ike ịmalite nke ahụ ịgbanwe.
N'ikwu okwu n'ozuzu, na Sandals Jamaica Royal Caribbean na Montego Bay nwere uwe-nhọrọ nhọrọ nke edobere na agwaetiti ya ma ị nwere ike ịgba ọtọ n'ebe ahụ.
Anabataghị nkwado nke gọọmentị na-ahụ maka ebe a na-ahụ maka ụmụ nwanyị nọ n'ụsọ osimiri na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị na Sanda Mgbe a jụrụ ya banyere oke oke maka ụmụ nwanyị na Sandals Jamaica n'ụsọ osimiri, nzaghachi sitere na Sandals management bụ: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla emee mkpesa ma ọ bụ mejọọ gị" enwere ike ịgwa "ka ọ kpuchie, mana ọ dịkarịghị onye ọ bụla mere mkpesa"
E nwere ọtụtụ ebe ntụrụndụ na Jamaica, ụfọdụ na-eri nri ndị na-ahọrọ uwe ma ọ bụ nke kacha mma. ” Otu bu Di na Nwunye Sans Souci ezumike na Jamaica. Iwu e nwere: “I nweghị ike iyi akwa.”
Ebe ezumike niile nwere nnukwu osimiri gba ọtọ na ọdọ mmiri na-aga n'akụkụ osimiri. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ebe ntụrụndụ nudist na-arụ ọrụ 'uwe-nhọrọ', ebe a na-egbochi uwe n'ụsọ osimiri kpamkpam. Sans Souci nwere nnukwu ebe ịgba ọtọ enwere ike iru ngwa ngwa ebe ị nwere ike ịbịa ma laa n'oge ọ bụla na nke ahụ bụ naanị ebe ezumike ahụ.
Enwere isi okwu ato maka mpaghara Au Naturel. 1) Di na Nwunye naanị, 2) Iwu ịgba ọtọ na 3) Ọ dịghị foto. Iwu nke mbụ, ịnweghị ike ịga naanị gị - ọ bụ ụlọ di na nwunye, ma akụkụ abụọ nke di na nwunye ga-aga.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ abụghị ebe ntụrụndụ, mana ma eleghị anya, otu senweghi ike ile anya karịa akpụkpọ ụkwụ na-aga na a aka nke nudism kama ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ha chọrọ.